'पाताल लोक' मा नेपाली महिलालाई तुच्छ गाली गरेको भन्दै माफी माग्नुपर्ने नेपाली कलाकारको माग
काठमाडौं, जेठ ५ : बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले निर्माण गरेकी वेब सिरिज ‘पाताल लोक’ मा नेपाली महिलालाई तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेको भन्दै नेपाली कलाकारले विरोध जनाएका छन्। अमेजन प्राइम भिडियोमा प्रसारण हुने उक्त सिरिजमा एक महिला प्रहरीले अर्की महिलासँग अनुसन्धानका क्रममा नेपाली महिलाको अपमान हुनेगरि गाली गरिएको छ।
उक्त भिडियालाई लिएर नेपाली कलाकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाउँदै भिडियो हटाउन माग गरेका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर, गायिका अभय सुब्बालगायतले नेपाली नारीको अपमान भएको भन्दै उक्त भिडियोको विरोध गरेका छन्।
अभिनेत्री रेखा थापा भारतले लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि धावा बोलेको र बलिउडका फिल्म र सिरियलमा नेपालीको अपमानजनक संवादमा आपत्ती जनाएकी छिन्। उनले नेपाली महिलालाई गाली दिइएको शब्द हटाउनु पर्ने भन्दै अनुष्काले माफी माग्नुपर्ने बताएकी छिन्।
अभिनेत्री केकी अधिकारीले भने महिलालाई तुच्छ गाली गर्न हामीले नै सिकाएकोले यस्तो शव्दको प्रयोग उनीहरुले गरेको बताएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेकी छिन्, ‘हो हामीबाटै सिकेका हुन्। यिनीहरुलाई भन्न मिल्ने रहेछ भनेर हामीले नै उक्साएका हौं। छातीमा हात राखेर भन्नुस् त हामीले आफ्नै देशका दिदी बहिनीलाई यस किसिमको अपहेलना किन गरेका छौं ? अनि हामी यो आशा गरिरहेका छौं कि अरु चाहिँ बदलिउन्। तर आफूलाई त जति पनि अधिकार छ महिलाको चरित्र हत्या गर्ने ? हैन ?’
Published Date: Monday, 18th May 17:23:58 PM
लकडाउनमा लभ स्टोरी लेख्दै सलमान
रकुम घटनाले स्तब्ध र आक्रोसित राजेश हमाल
रिलायन्स इन्टरटेन्मेन्टका शिवासिष सरकारलाई कोरोना संक्रमण
अजय देवगनद्वारा धारावी वस्तीका लागि अक्सिजन र भेन्टिलेटर सहयोग